Kooxda Liverpool oo guul muhiim ah ka gaartay Kooxda Southampton misane la wareegatay hogaanka horyaalka+Sawiro – Gool FM
Kooxda Liverpool oo guul muhiim ah ka gaartay Kooxda Southampton misane la wareegatay hogaanka horyaalka+Sawiro
( Premier League ) 5 Abriil 2019 Kooxda Liverpool ayaa guul muhiim aheyd ka gaartay Kooxda Southampton kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League , natiijada ciyaarta ayaana ku dhamaatay 3-1 oo ay guushu ku raacday kooxda Liverpool.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa lagu kala maray bar-baro 1-1 , ciyaartoyda labada dhinac ayaana soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan .
Goolka waxaa la hormaray Kooxda Southampton waxaana u dhaliyey weerarkooda Long daqiiqadii 9-aad ee ciyaarta kaddib caawin uu ka helay Hojbjerg.
Liverpool oo xaalada ay ku xuntahay ayaa ugu dambeen heshay goolka bareejada daqiiqadii 36-aad waxaana goolkaas u dhaliyey Keita kaddib caawin uu ka helay Alexander-Arnold.
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa lagu kala maray 1-1 , nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan .
Liverpool ayaa dadaal weyn ku bixisay sidii ay ku heli laheed goolka guusha ee ciyaarta waxaana goolkaas u dhaliyey laacibkooda reee Masar ee Mohamed Salah daqiiqadii 81-aad ee ciyaarta , natiijada ciyaarta ayaana noqotay 2-1.
Southampton waxaa la soo darsay niyad jab xoogan kaddib markii laga dhaliyey goolkii sedexaad ee ciyaarta daqiiqadii 86-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas dhaliyey Henderson waxaana caawinteeda lahaa Firmino .
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku soo dhamaaday 3-1 oo ay guushu ku raacday kooxda Liverpool oo dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka .
Manchester United oo mid ka mid ah difaacyadeeda u isticmaalaysa sidii ay u soo qaadan lahayd Raphael Varane
HORDHAC : Barcelona VS Atletico Madrid ? Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey ciyaarta .